Gemini kunye Gemini Ukuhambelana: ♥ A Umdlalo Brilliant - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Gemini kunye Gemini Ukuhambelana: ♥ A Umdlalo Brilliant
Ephepheni iGemini kunye neGemini banayo yonke into efunekayo ukwenza isibini esikhulu, kodwa bahlala benengxaki yokwenza. Fumana ukuba ngaba bangamaqabane ahambelanayo.
Esi sibini sibonakala siyibetha kwangoko, kodwa xa kuziwa ekusekeni uthando lwabo izinto zihlala zinzima. Aba babini benza esona sibini siqaqambileyo nesihlekisayo sezodiac, kodwa basenobunzima bokuzibophelela omnye komnye. Uxabiso lwabo oluqhelekileyo lokuthatha uhambo luthetha ukuba baya kubona umhlaba kunye, kodwa ngaba ukuthanda kwabo kuya kwanela ukuqinisa uthando lwabo? Fumana inqaku leGemini kunye neGemini elihambelanayo kwaye nokuba banayo na into efunekayo ukuze bathandane.
'IGemini kunye neGemini bayasokola ukuhlala benyanisekile!'
Inqaku lokuhambelana kweGemini kunye neGemini: 3/5
Iyadlala kwaye ayikhathali, aba babini bavana ngokumangalisayo! UGemini uthanda iintlobo ngeentlobo zeentelekelelo zobukrelekrele. I-Gemini ifuna ukunxibelelana ngokufanelekileyo, ukuphuma, kwaye iphile ubomi bobutsha obungunaphakade. Nangona kunjalo, iiGemini ezimbini zinokuba novalo ngokujikeleze enye kwaye ngamanye amaxesha zithetha ndlongo, yiyo loo nto unxibelelwano oluvulekileyo lubaluleke kakhulu. Bobabini bafanele babe noburharha ukuze bakwazi ukunqanda ukuhlala kwii-vibes ezimbi. Aba bantu bomthonyama bobabini bayadlala kwaye abakhathali, nto leyo ethetha ukuba bavana ngokumangalisayo. I-Gemini ithanda ubudlelwane obucebileyo kunye nokwahlukeneyo kwengqondo, bafuna ukunxibelelana ngokusemandleni abo kubudlelwane babo, ukuzonwabisa, ukuphuma, ukuphucula, ukuphila ubomi babo njengomntwana ongunaphakade.
Kutheni le duo inokusebenza ngothando
IiGemini ezimbini kunye ziya kuthatha ubomi ngeempondo kwaye zisebenze kunye neengxaki zabo kunye. Nangona xa enomsindo, iGemini ingabonisa ngokwenene elinye icala lobuntu babo kunye ukuba buhlungu ngokwenene ngamazwi abo. Ukuze uphumelele, esi sibini sidinga idosi elungileyo yokugigitheka kunye nokuhleka. Ungumntu ofanayo kwaye uyazi phantse ngokwethuku ukuba iqabane lakho licinga ntoni. Wenziwa ukuba udibane kwaye wenze iinkumbulo. Ukusuka kokungunda okufanayo, ufana nesipili somnye ngaphandle kokwazi, amaqabane omphefumlo wokwenene.
Yintoni ebangela ukuba zingahambelani?
Ngokucinga okufanayo, ningakwazi ukulahlekelwa nguwe omnye komnye kwaye ubone ubuntu bakho buginywe kukuvumisa ngeenkwenkwezi kabini. Ngaloo ndlela, uya kuba nombono okhoyo ngomnye, oya kulubeka emngciphekweni ubudlelwane bakho. Phakathi kwaba banxibelelanisi babini, iingxabano zinokuba nobundlobongela kakhulu. Enyanisweni, uGemini unokuba novalo kwaye ngamanye amaxesha athethe ndlongondlongo.
Funda ngakumbi malunga noku ngena 15 iinyani malunga Gemini -
Phakathi kwefantasy, inyani, amagama kunye nezijekulo, yonke into ihambelana ngokugqibeleleyo kwaye Iintlantsi ziphaphazela kwigumbi lokulala! Ukuba ubomi bakho bokwabelana ngesondo buqala njengesaqhwithi, xa ubudlelwane buba bexesha elide, ukungazinzi kunye nokuxhalaba ngokuthe ngcembe kuthatha umnqweno kunye ne-libido.
Cacisa iimvakalelo zakho kunye nosukelo lwakho. Ukuba nichitha ixesha elininzi nincokola, anithethi ngeemvakalelo neemvakalelo zenu, ezisisiseko sesibini. Lumka ungahlali ujonge phezulu kwicala lezinto ngaphandle kokutyhila iingcinga zakho zokwenyani.
I-S T ilungiselele zonke iimbono ozifunayo kwi ubuntu Gemini kwaye siyakukhuthaza ukuba wenze njalo bala uphawu lwakho olunyukayo ukuba awukayazi!
<= Back to the iphepha ukuhambelana uthando
Izizathu zokuba kutheni iSibonakaliso ngasinye seZodiac sikhohlisa iqabane labo